काँग्रस मतगणना स्थलमै गो’ली चलेपछि प्रहरी सहित ७ घाइते! – PathivaraOnline
Home > समाचार > काँग्रस मतगणना स्थलमै गो’ली चलेपछि प्रहरी सहित ७ घाइते!
काँग्रस मतगणना स्थलमै गो’ली चलेपछि प्रहरी सहित ७ घाइते!
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्युठान जिल्ला अधिवेशनको मतगणनास्थलमा झ’ड’प भएको ५ । मंगलबार राति मतगणनास्थल स्वर्गद्वारी क्याम्पसमा कांग्रेस कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झ’ड’प भएको हो ।
झ’ड’पका क्रममा दुई प्रहरीसहित कम्तिमा ७ जना घाइते भएका छन् । मतपरिणाममा असन्तु ष्टि जनाउँदै युवाहरुले गरेको प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनसँगै झ’ड’पले उग्र रुप लिएको भन्दै स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही राउन्ड गो’ली चलाउनुका साथै सात सेल अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो । प्रहरीकाअनुसार अहिले स्थिति नियन्त्रणमा रहेकाे छ ।
बारले आज उच्च अदालतहरुमा विरोध सभा गर्ने
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजिनामा माग्दै एक महिनादेखि आन्दोलनमा रहेको नेपाल बार एशोसियसनले आज उच्च अदालतहरुमा विरोध सभा गर्ने भएको छ ।
देशका १८ वटै उच्च अदालत रहेका स्थानमा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्न बारले मातहतका इकाईहरुलाई निर्देशन दिएको छ । १८ वटै उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पनि खटाइएको बार महासचिव लीलामणि पौडेलले एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।
विरोध कार्यक्रम अनुसार बारको केन्द्रीय नेतृत्व भने पाटन उच्च अदालत परिसरमा हुने विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुने छ ।
एमाले महाधिवेशनको आकर्षण, २५ स्थानमा ‘सेल्फी प्वाइन्ट’
भर्खरै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलबाट आयो यस्तो खबर…
मदन भण्डारीको ह’त्या’ गरिएको थियो, अब ह’त्या’रा छि’ट्टै खोजिन्छ : बादल
नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेकाे बढ्यै, एकैदिन १५६ थपिएपछि …